चिलीका मापुचेहरूको लागि मिलाएको राम्रो योजनाको राम्रो परिणाम | अध्ययन
प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण | जनवरी २०१३
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओरोमो काजाक किन्यारवान्डा किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मले मालागासी माल्टिज म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिलिगेनोन
राम्रो योजनाको राम्रो परिणाम
मारिया इसाबेल सानै उमेरकी भए तापनि जोसिलो प्रकाशक हुन्‌। उनी दक्षिण अमेरिकामा पर्ने चिली देशको सान बर्नाडो सहरमा बस्छिन्‌। उनी र उनको परिवार आदिवासी मापुचे समुदायका सदस्य हुन्‌। मापुडुङ्गुन पनि भनिने मापुचे भाषाको नयाँ मण्डलीलाई सघाउन उक्त परिवार जोडतोडले लागिरहेको छ।
ख्रीष्टको मृत्युको स्मरणार्थ उत्सव मापुडुङ्गुन भाषामा पनि हुनेछ र त्यही भाषामा २,००० प्रति निम्तो पर्ची छापिएका छन्‌ भन्ने घोषणा सुनेपछि कसरी मदत गर्न सकिन्छ भन्नेबारे मारिया इसाबेलले गहिरिएर सोचिन्‌। स्कूलका साथी र शिक्षकहरूलाई प्रचार गरेर राम्रो परिणाम हासिल गरेका अरू विद्यार्थीहरूको अनुभव उनले सम्झिन्‌। यसबारे उनले आमाबाबुसित कुरा गरिन्‌। अनि स्कूलमा निम्तो पर्ची बाँड्ने कुनै जुक्ति निकाल्न आमाबाबुले मारियालाई प्रोत्साहन दिए। मारियाले कस्तो योजना बनाइन्‌?
सुरुमा, मारियाले स्कूलको मुख्य प्रवेशद्वारमा निम्तो पर्ची टाँस्न स्कूल प्रशासनसित अनुमति मागिन्‌। उनले अनुमति मात्र होइन, यस्तो अग्रसरता देखाएकोमा स्याबासीसमेत पाइन्‌। एक दिन बिहान हाजिर लिने बेला स्कूलको प्रिन्सिपलले उक्त निम्तोबारे लाउडस्पिकरबाट घोषणासमेत गरे!
पछि मारियाले सबै कक्षामा जाने अनुमति मागिन्‌। शिक्षकहरूबाट अनुमति पाएपछि उनले प्रत्येक कक्षामा गएर कोही मापुचे छन्‌ कि भनेर सोधिन्‌। उनी भन्छिन्‌: “स्कूलभरि मापुचे परिवारका १०/१५ जना विद्यार्थी होलान्‌ भन्ठानेकी थिएँ तर धेरै रहेछन्‌—मैले १५० वटा निम्तो पर्ची बाँडें!”
“पाको व्यक्ति होला भन्ठान्नुभएको रहेछ”
स्कूलको मुख्य प्रवेशद्वारमा उक्त निम्तो पर्ची देखेपछि एउटी स्त्रीले त्यसबारे कोसित कुरा गर्ने भनेर सोधिन्‌। दस वर्षीया केटीसित भेटाइदिंदा तिनी तीन छक परिन्‌! मारिया इसाबेल हाँसदै भन्छिन्‌, “पाको व्यक्ति होला भन्ठान्नुभएको रहेछ।” निम्तो पर्ची दिएर छोटो कुराकानी गरेपछि मारियाले तिनको ठेगाना सोधिन्‌। पछि आफ्ना आमाबाबुसित गएर ती स्त्रीलाई परमेश्वरको राज्यबारे धेरै कुरा बताउन चाहन्थिन्‌। स्मरणार्थ उत्सवमा ती स्त्रीलगायत अरू २६ जना मापुचे मानिस उपस्थित भए। यो देख्दा मापुडुङ्गुन भाषाको इलाकामा सेवा गरिरहेका २० जना प्रकाशक अत्यन्तै हर्षित भए। अहिले त्यो समूह एउटा जोसिलो मण्डली भएको छ!
तपाईंको उमेर जतिसुकै होस्, आफ्ना सहपाठी वा सहकर्मीहरूलाई स्मरणार्थ उत्सव, जनभाषण वा जिल्ला अधिवेशनको लागि निम्तो दिन अग्रसर हुनुभए कसो होला? राम्रो परिणाम हासिल गर्ने उपायबारे हाम्रा प्रकाशनहरूमा पाइने विभिन्न अनुभव खोज्नुभए कसो होला? साथै यहोवाबारे अरूलाई बताउने साहस बटुल्न उहाँसित पवित्र शक्ति माग्नुहोस्। (लूका ११:१३) यसो गर्नुभयो भने राम्रो योजनाको राम्रो परिणाम देखेर छक्कै पर्नुहुनेछ र अझ प्रयास गर्न हौसला पाउनुहुनेछ।
तिनीहरूले राजीखुसीले आफैलाई अर्पण गरे​—नर्वे
साहसी हुनुहोस्​—यहोवा तपाईंको साथमा हुनुहुन्छ!
कुनै पनि कुराले तपाईंलाई यहोवाबाट टाढा नलैजाओस्
यहोवासित सधैं नजिक हुनुहोस्
पछुतो नमानी सेवा गर्नुहोस्
एल्डरहरू—‘हाम्रो आनन्दको निम्ति सहकर्मी’
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण जनवरी २०१३
प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण जनवरी २०१३